February 2012 | နေမင်းဇွဲမာန်
The Garden of Cosmic speculation ဆိုတဲ့ ဥယျာဉ်ကတော့ တစ်နှစ်မှာ တစ်ရက်သာ အများပြည်သူများ အတွက် ဖွင့်ပေးလျက်ရှိပြီး သဘာဝ အလှတရားတွေကို သိပ္ပံနဲ့သချာင်္ ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းပုံစံတွေ ပေါင်းစပ် ဖန်တီးထားထားတဲ့ လှပအံ့သြမှုတွေ ပြည့်နှတ်နေတဲ့ ဥယျာဉ်ဖြစ်ပါတယ် ။ Charles Jencks နဲ့ သူရဲ့ဇနီး ဖြစ်သူ Maggie Keswick တို့ ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး Scotland မှာ တည်ရှိပါတယ် ။ အများပြည်သူများက ဖွင့်ရက်ကို တစ်နှစ်မှာ တစ်ရက်ထက် ပိုဖွင့်ပေးဖို့ ကို မျှော်လင့်လျက်ရှိကြပါတယ် ။
၂၀၁၂ မှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ Firefox Themes လေးတွေ...
၂၀၁၂ မှာထွက်ရှိလာတဲ့ Firefox Themes လေးတွေပါ ...
အချိန် ၁၆ နှစ်ကြာအောင် ဖန်တီးခဲ့ရတဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာ ဖန်တီးမှုတစ်ခု...
ဘူဂေးရီးယား နိုင်ငံမရဲ့ အထင်ရှားဆုံးနဲ့ အကြီးဆုံး အဆောက်အအုံ ပုံစံဖြစ်တဲ့ Orthodox monastery ပုံစံကို အနုပညာရှင် Plamen Ignatov က မီးခြစ်ဆံပေါင်း ၆ မီလီယံ အသုံးပြုပြီး အချိန် ၁၆ နှစ် ကြာတဲ့အထိ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဖန်တီးခဲ့တာပါ ။ သစ်သားချောင်း အနည်းငယ်နဲ့ ကျောက်တုံး အနည်းငယ်ပဲ နောက်ထပ် လိုအပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီဖန်တီးမှုပုံစံကို ဘူဂေးရီးယား နိုင်ငံ ဆိုဖီယာ မှာရှိတဲ့ Museum of Archaeology ပြတိုက်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ထုထည် အကြီးဆုံး သစ်ပင်ကြီး...
ဒီသစ်ပင်ကြီးကို Sequoia လို့ နာမည်ပေးထားပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမြင့်ဆုံး မဟုတ်ပေမယ့် ထုထည် အကြီးမားဆုံး သစ်ပင်ကြီး ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီသစ်ပင်ကြီးရဲ့ သက်တမ်းက နှစ်ပေါင်း ၂၃၀၀ နဲ့ ၂၇၀၀ အတွင်းမှာ ရှိပါတယ် ။ ကယ်လီဖုန်းနီးယားပြည်နယ် Giant Forest of Sequoia အမျိုးသားပန်းခြံထဲမှာ တည်ရှိပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကစပြီးတော့ ကမ္ဘာ့ထုထည် အကြီးဆုံး သစ်ပင်ကြီးလို့ သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ ။ ဒီသစ်ပင်ရဲ့ အရွယ်အစားက ၁၄၈၇ ကုဗမီတာ ရှိပြီး အမြင့်ကတော့ ၈၄ မီတာ ရှိပါတယ် ။
တူရကီ နိုင်ငံသား တစ်ယောက် ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကားပုံစံလေးပါ ။ ပြုလုပ်ပုံလေးတွေကို ကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
၁၀။ Justin Bieber ရဲ့မွေးနေ့ကတော့ မတ်လ ၁ ရက်နေ့ ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ် ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ TOWER အဆောက်အအုံကြီး...
ထိုင်ဝမ် စက်မှုဇုံနယ်မြေ အတွင်းမှာ တည်ရှိပြီး ဇီဝစွမ်းအင်တွေ ၊ solar energy တွေနဲ့ လေထု အရင်းအမြစ်တွေကိုပါ ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အလွန်ကြီးမားတဲ့ TOWER တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။
သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း စနောက်လို့ကောင်းတဲ့ ကိတ်မုန့်လေးတွေ...
ဒီကိတ်မုန့်လေးတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ idea လေးကတော့ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ပျော်ရွှင်စွာ စနောက်ကြဖို့ ဖန်တီးထားတာလေးတွေပါ ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ခြောက်လှန့်ချင်တဲ့အခါ မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းကို အစာမကြေအောင် စနောက်ချင်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်ပါတယ် ။
အနာဂတ်မှာ အသုံးပြုလာကြမယ့် သွားတိုက်တံ အမျိုးအစားပုံစံ...
ဒီသွားတိုက်တံမှာ ဆိုရင် မိမိသွားတိုက်နေစဉ် မိမိသွားကို ပြန်မြင်နိုင်ဖို့ ကင်မရာတပ်ဆင်ထားပြီး သွားကိုသေချာ မြင်နိုင်စေဖို့လည်း UV light ကို အသုံးပြုထားပါတယ် ။ အဲဒါကြောင့် သွားတိုက်နေစဉ်းမှာ မိမိသွားတွေကို အလွယ်တကူကြည့်ပြီး စင်ကြယ်အောင် သန့်ရှင်းနိုင်ပါတယ် ။
ကလေးငယ်များအတွက် တီထွင်ထားတဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်ပုံစံ...
ဒီတံခါးမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ လုံခြုံရေး စနစ်ပုံစံလေးကတော့ မိမိကလေးတွေကို အိမ်မှာထားခဲ့ရပြီး အလုပ်သွားနေရတဲ့ မိဘတွေ အတွက် မိမိကလေးငယ်တွေကို တစ်စုံတစ်ရာ အန္တာရယ်ပေးနိုင်တဲ့ လူစိမ်းတွေရဲ့ ရန်ကနေ စိုးရိမ်သောက ရောက်နေစရာ မလိုတော့ပါဘူး ။ ပုံမှန်တံခါးးတွေမှာ တပ်ဆင်အသုံးပြု ထားတဲ့ လုံခြုံရေးမှန်ပေါက်လေးတွေက ကလေးတွေအနေနဲ့ ကြည့်ဖို့ အခတ်အခဲ တွေ့နိုင်ပါတယ် ။ ဒီတံခါးမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ စနစ်လေးကတော့ ကလေးငယ်တွေ အတွက် အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မီးခြစ်ဆံလေးတွေကို ဒီလို အသုံးချလိုက်တဲ့အခါ...
ဒီလိုထူးထူးခြားခြား အနုပညာ ဖန်တီးမှုလေးအတွက် အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်ထားတက်ဖို့ အမှန်တကယ်ပဲ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ။ ဇွဲရှိရှိနဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ဖန်တီးလိုက်တဲ့ အခါ အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဖန်တီးမှုလေးတွေ ရရှိလာပါတယ် ။
ကျမ်းစာအုပ်တွေနဲ့ ပုံဖော်ဖန်တီးထားတဲ့ လက်ရာလေးတွေ...
ကျမ်းစာအုပ်တွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီပြောင်မြောက်တဲ့ ဖန်တီးမှုလေးတွေကတော့ Laramee ရဲ့ လက်ရာလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ အရမ်းလှပပြီး အနုစိတ် ဖန်တီးထားတဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာ ဖန်တီးမှုလေးတွေ ကိုခံစားကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
ချိုမြိန်လှပတဲ့ ချောကလက်ဖန်တီးမှုလေးတွေပါ ။
2012 မှာထွက်ရှိလာတဲ့ Google Chrome Themes လေးတွေ
ဒီလို ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ဖန်တီးမှုလေးတွေကိုတော့ အနုပညာရှင် Takanori Aiba က ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူရဲ့ဖန်တီးမှုတွေမှာ သဘာဝနဲ့ လူတွေရဲ့ ရောနှောဆက်နွယ်နေမှု ပုံစံလေးတွေက အလွန်လက်ရာ ပြောင်မြောက်ပါတယ် ။
စီးကရက် အလိပ်ပေါင်း ငါးသိန်းနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကျားအရေခွံ ပုံစံ ခြေသုတ်ခုံ ...
ဒီလို ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ ပုံဖော်မှုမျိုးကို ပြုလုပ်ခဲ့တာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှ အနုပညာရှင် Xu Bing ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပုံဖော်မှုအတွက် စီးကရက် အလိပ်ပေါင်း 500,000 ကျော်ကို အသုံးပြုခဲ့ရတာပါ ။ အလေးချိန် ၂၂၀ ပေါင် ရှိပြီး Virginia ပြတိုက်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်နေ့က စတင်ပြသခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီလမှာတော့ Aldrich Contemporary Art ပြတိုက်ကို ပြောင်းရွှေ့ပြသခဲ့ပါတယ် ။
ဂျပန်လူမျိုး အနုပညာရှင် Akinobu Izumi က ဒီလိုပုလင်းလေးတွေထဲမှာ ထည့်လို့ရနိုင်တဲ့ အလွန်သေးငယ်တဲ့ စက္ကူရုပ်ပုံလေးတွေကို ခတ်ခတ်ခဲခဲ ဖန်တီးထားတာပါ ။ ပုလင်းလေးတွေရဲ့ အရွယ်အစားကတော့ ၀.၉ လက်မပဲရှိပြီး အမြင့်ကတော့ ၀.၅ လက်မပဲရှိပါတယ် ။
Jim Dingilian ဆိုတဲ့ အနုပညာရှင်က ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီလို ပုလင်းတွေမှာ ပုံဖော်နိုင်ဖို့ကို ဖယောင်းငွေ့ကို အသုံးပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ခတ်ခတ်ခဲခဲ နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ Jim Dingilian ရဲ့ ထူးဆန်းအံ့သြ ဖွယ်ရာ ပန်းချီလက်ရာလေးတွေကို အောက်မှာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် ။
တစ်နေ့တာ လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေ ပြီးဆုံးလို့ ညဘက်အနားယူတဲ့အခါ သက်သောင့်သက်သာနဲ့ အိပ်စက်စေဖို့ အတွက် အိပ်ရာကောင်းကောင်းလေး ရှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ် ။ အိပ်ရာပုံစံ အမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ။
ထူးထူးခြားခြား ဖန်တီးထားတဲ့ ဆိုဖာခုံကြီး...
ဒီဆိုဖာဟောင်းကြီးရဲ့ အောက်မှာ ဘာရှိတယ်ဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ ဆက်ဖတ်ကြည့် လိုက်ပါဦး...
သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဖန်တီးမှုလေးတွေ...
ဓါတ်ပုံဆရာ Klaus Enrique Gerdes က ဒီလို ထူးထူးဆန်းဆန်း အနုပညာဆန်တဲ့ ဖန်တီးမှုမျိုးကို ဖန်တီးခဲ့တာပါ ။ ဒီဖန်တီးမှုလေးတွေိကု " arcimboldo " လို့ခေါ်ပြီး ဒီနာမည်က ၁၆ရာစုလောက်က ကျော်ကြား ထင်ရှားခဲ့တဲ့ ပန်းချီဆရာ ကိုတင်စားထားတာပါ ။
အနုပညာရှင် Isaac Salazar စာအုပ်တွေကနေ တစ်ဆင့် ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ ဖန်တီးမှုလေးတွေပါ ။
ခိုးယူလုယက်မှုနှုန်း အများဆုံး ကြုံတွေ့နေရသော နိုင်ငံစာရင်း...
2012 ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ကမ္ဘာကျော် မင်းသားများ...
၂၀၁၁ တွင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်မှု အများဆုံး ဖြစ်ပွားခဲ့သော နိုင်ငံများ...
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်သာ မြင်တွေ့နိုင်သော မြင်ကွင်းလေးတွေ...
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်သာ မြင်တွေ့နိုင်သော မြင်ကွင်းလေးတွေ...
အာရှမှာပဲ မြင်နိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းလေးတွေ...
Valentine 's Day လက်ဆောင်လေးတွေ...
သင်မသိသေးတဲ့ Valentine’s Day နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အချက်လေးတွေ...
1. This holiday is the second largest event after the Christmas in CARD SALES, around $15.7 billion is spent each year on cards.
၁. Valentine’s Day cards ရောင်းအားဟာ Chirstmas 's card ရောင်းအားအောက် ဒုတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး နှစ်စဉ် $15.7 billion လောက်ကို ဒီ cards အတွက် အသုံးပြုနေရပါတယ် ။
Valentine’s Day အတွက် အကောင်းဆုံး စာသားလေးတွေ...
ဒီပုံလေးနဲ့ စာလေးကို ပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ လက်ခံရရှိမယ့် မိမိချစ်သူ အနေနဲ့ စာသားလေးနဲ့ထပ်တူ ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ ဆိုထားပါတယ် ။ တစ်ခြား စာသားလေးတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
“U rdbeat of my heart ", " love of my soul ", " I’ll never leave you & never wanna let u go ”
ကမ္ဘာအလှပဆုံးလေဆိပ်တွေထဲကအထင်ရှားဆုံးလေဆိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာဆက်လက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ် ။
ဟောင်ကောင်မြို့ရှိ ခေတ်မှီလှပတဲ့ မိုးမျှော်အဆောက်အဦးများ...
Hong Kong နိုင်ငံကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လှပခေတ်မှီတဲ့ မြို့ အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ မြို့စ်မြို့လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ယာဉ်ကျေးမှု အမျိုးမျိူးကို တွေ့ရှိနိုင်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ယာဉ်ကျေးမှုတွေကိုလည်း ယခုထက်ထိထိန်းသိမ်း လာခဲ့တဲ့ မြို့ဖြစ်ပါတယ် ။ ဟောင်ကောင်မြို့ကို ရောက်ခဲ့ရင်တော့ ဒီလို ခေတ်မှီလှပတဲ့ မိုးမျှော် အဆောက်အဦး တွေကို တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် ။
လန်ဒန်မြို့ရှိ Google ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ရုံးခန်း ဒီဇိုင်းများ..
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကမ္ဘာကျော် movies ပိုစတာတွေ...
Free Valentine’s Day fonts download လေးတွေ...
သေချာတွေ့မြင်ရန် ခတ်ခဲတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ...
ထူးထူးဆန်းဆန်း လည်ပင်းပိုင်ရှင်တွေ ...
ဇိမ်ခံအပျော်စီးကားကြီး စီးချင်သူများ အတွက်...
price : £ 1.9 million